प्रदेश विशेष Archives - KhabareraKhabarera
प्रदेश विशेष Archives - Khabarera
६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १८:४२
कृषि मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति सार्वजनिक, माटो परिक्षणको सुरुवात
सुर्खेत । भुमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले आजदेखि (सोमबार)बाट माटो तथा मल प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने भुमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिएकी छन् । सोमबार मन्त्रालयको वार्षिक प्रगती समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो जनाएकी हुन् । सहकारी मन्त्री केसीले किसानहरुको समस्यालाई ध्यानमा राखी आजैदेखी माटो परिक्षणको काम समेत शुरु […]
५ फाल्गुन २०७५, आईतवार १६:५९
तीन वर्षमै भेरी–बबई सुरुङको ब्रेक थ्रु
सुर्खेत । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ निर्माण कार्यको ब्रेक थ्रु तीन वर्षमै हुने भएको छ । शुरुङ निर्माण कार्यको ब्रेक थ्रु चैत भित्र गर्ने तयारीमा आयोजना युद्ध स्तरमा जुटेको छ । भिडियो लि‌कंKhabarera
५ फाल्गुन २०७५, आईतवार १२:०५
सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं. ४ ले वडाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गरेको छ । शुक्रवार विहानदेखि सो ट्याक्टरले वडाभित्रको फोहोर बोकेर विसर्जन गर्न थालेको छ । वडाअध्यक्ष निलकण्ठ खनालले शहरोन्मुख रहेको वडामा फोहोर बढ्दै गएको र बेलैमा व्यवस्थापनका लागि ट्याक्टर खरिद गरिएको बताए । उनले वडाकै करिव १९ लाखको बजेटबाट खरिद गरिएको […]
४ फाल्गुन २०७५, शनिबार १३:५४
कर्णाली प्रदेशकाे एकवर्ष सिकाईमै सिमित
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको शुक्रबार (फागुन ३ गते) एक वर्ष पूरा भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको अवधिमा बिना संरचना पनि उल्लेख्य काम गर्न सफल भएको दाबी गरेको छ । सरकार स्थापनाको एकवर्ष पुरा भएको अवसरमा प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले एकवर्षको अवधि सरकारको सिकाईको वर्ष रहेको […]
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १७:०९
तरंगामा अविभेदसम्बन्धी तालिम
सुर्खेत । स्थानीय स्तरका मूख्य अभिकर्ता परिचालनका लागि मानव अधिकार र अविभेद सम्बन्धी तीन दिने तालिम बराहताल गाउँपालिका ४ तरंगामा सम्पन्न भएको छ । साझा आवाज परियोजनाको सहयोगमा नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ सुर्खेतको आयोजना तथा बराहताल गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ संगको सहकार्यमा तालिम सञ्चालन गरिएको हो । तालिमको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै […]
३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार १४:०९
ट्राफिक कार्यालयद्धारा एक करोड राजश्व संकलन
सुर्खेत । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतले चालु आर्थिक वर्षको ७ सहिनामा झण्डै एक करोड राजश्व संकलन गरेको छ । दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि सक्रिय ट्राफिक प्रहरीले आर्थिक वर्षको फागुन १ गतेसम्ममा ९० लाख ८२ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको हो । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हरिबहादुर विसीले दिएको जानकारी अनुसार सात महिनामै राजश्व संकलनको […]
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार १७:०८
रेडियोहरुको रोयल्टीलाई कम गराउन सरकार तयार – मन्त्री बाँस्कोटा
सुर्खेत । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले बनाउन लागेको ऐन नियमप्रति नतर्सन संचारमाध्यमहरुलाई सुझाव दिएका छन् । उनले अव्यवस्थित भएका संचारमाध्यमहरुलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न ऐनहरु ल्याउने तयारी गरिरहेकोले नतर्सन आग्रह गरे । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको सुर्खेतमा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले समानुपातिक विज्ञापन नीति निर्माण गरिएको जानकारी दिदैं […]
२९ माघ २०७५, मंगलवार १३:०३
एक दशकदेखि अलपत्र दलित छात्राबास बन्ने निश्चित
सुर्खेत । विगत एक दशक अगाडिदेखि वीरेन्द्रनगरमा निर्माण कार्य थालिएको दलित छात्रावास अव बन्ने भएको छ । छात्राबासका लागि संघीय सरकारले बजेट दिएपछि भवन बन्ने निश्चित भएको हो । भवनको सवै काम सक्नका लागि झण्डै एक करोडको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । पहिलो चरणमा ५० लाख बजेट प्राप्त भइसकेको शहरी विकास तथा भवन निर्माण संघीय […]
बाढीपीडित भन्छन् – हाम्रा पीडा नेताका चुनावी एजेन्डा मात्रै बने
सुर्खेत । निर्वाचनपछि सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारले दुई वर्ष पूरा गरिसक्यो । अन्य दुई सरकारले समेत आगामी वर्षका लागि बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसके । तर, बाढीपीडितको पीडामाथि तीनै सरकार बेखबरजस्तै छन् । ’बाढीपहिरोले दिएको पीडामा मलम लाग्ने आशा थियो, झन् नुनचुक थपियो,’ गिरीघाट शिविरका ५४ वर्षीय रामबहादुर सुनारले सुनाए, ’हाम्रा पीडा नेताका चुनावी […]
२७ माघ २०७५, आईतवार ०८:३२
गलकोट । जिल्लाको प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीयस्थलको रुपमा विकास भइरहेको पञ्चकोटमा शनिबार करीब एक हजार आन्तरिक पर्यटक अवलोकनका लागि आएको पञ्चकोटले जनाएको छ । मनै लोभ्याउने पञ्चकोटका धार्मिक कलाकृतिका संरचना हेर्न र धेरै वर्षपछि परेको हिउँमा खेल्नका लागि जिल्लाका अधिकांश पर्यटक त्यहाँ पुगेका हुन् । बागलुङ नगरपालिका–६ स्थित पञ्चकोटमा शनिबारको फुर्सदिलो समयमा परेको हिउँ तथा पञ्चकोटमा रहेका […]